China Collagen for Solid Drink ifektri nabaphakeli IGelken
Isiphuzo esiqinile se-Collagen uhlobo lokondleka okunomsoco ophakeme, ukunakekelwa okuluhlaza kanye nokunakekelwa kwempilo.
Ukuphuza collagen isiphuzo esiqinile njengamanje iqinisekiswe njengendlela enempilo nephumelela kunazo zonke yokwengeza i-collagen.
Ukukhula kweminyaka kanye nethonya lezinto zangaphandle kungalimaza ukwakheka kwe-collagen fiber yesikhumba, kuvimbele ukwakheka kwe-hyaluronic acid, ngaleyo ndlela kunciphise okuqukethwe komswakama wesikhumba, kubangele ukomiswa kwesikhumba, ukukhathala, nokoma. Ngakho-ke, ukwesekwa nge-collagen peptide ne-hyaluronic acid kunganikeza izinzuzo eziningi.
Ngenkathi zombili i-collagen ne-hyaluronic acid zitholakala ku-dermis, i-collagen isebenza kakhulu njenge "net elastiki", igcina ukuqina kobuso nokusiza isikhumba ukuthi simelane nokuncipha nokushwabana.
Inethiwekhi ye-collagen fiber eyakhiwe yi-collagen protein ekwakhiweni kwesikhumba inikeza isakhiwo esiyisisekelo se-hyaluronic acid, ukuze ikwazi ukubamba kangcono amanzi esikhunjeni futhi isize isikhumba ukuba siphume futhi siswakame.
Ngasikhathi sinye, i-hyaluronic acid nayo isiza inethiwekhi ye-collagen fiber ukuthi inwetshwe kangcono emanzini nasemvelweni. I-Collagen ne-hyaluronic acid "ngaphakathi nangaphandle" ndawonye ukusekela impilo yesikhumba.I-cosmetology yomlomo, njengengxenye evelayo ngenkathi "yomnotho wezinga lokubukeka", ihambisana nomqondo wendabuko "wangaphakathi ondla ngaphandle" kwabathengi baseChina.
Ubungako bemakethe yobuhle bomlomo bukhule ngama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-3.1 phakathi konyaka wezi-2013 nowezi-2015, okuphindwe kabili eminyakeni emibili edlule, ngokusho kwedatha evela kwiZhiResearch Consulting.
Ngokuzayo, imakethe yobuhle bomlomo yaseChina kulindeleke ukuthi ingene enkathini yentuthuko esheshayo, efinyelela kuma-yuan angama-23.8 billion ngo-2022.
Ngemuva kokukhula ngesivinini esikhulu, nakanjani kuzobangela isisombululo somncintiswano.
Kodwa-ke, emkhakheni wobuhle bomlomo wanamuhla, uma i-collagen enezinga eliphakeme lokuqwashisa abathengi ingahlanganiswa ngokuphelele "nezinkanyezi ezikhulayo" njenge-hyaluronic acid ukukhulisa imakethe ngokuhlanganyela, ngokuqinisekile kuzoletha amandla amaningi ekuthuthukiseni imakethe yobuhle bomlomo. kanye nempilo yabathengi.
Langaphambilini I-Collagen yebha yokudla okunempilo
Olandelayo: I-Collagen Peptide